I-Apple iyakwazi ukwenza imali | TeraNews.net
I-Apple ingenza imali
umbhali artem Kushicilelwe ku 05.02.2018
Abahlaziyi be-Apple babike ukuthi ukuthengiswa kwe-smartphone kwekota edlule, kunikeze ukuphathwa kwezindaba ezimbili - okuhle nokubi. Okokusebenza kwamaselula kusuka kuhlelo olumenyezelwe kumayunithi we-100 wezigidi, kungenzeka ukuthi ukwazi ukubona kuphela amayunithi wezigidi ze-77,3 - i-77% yesibalo okuhlosiwe. Kodwa-ke, ngokwezezimali, ngenxa yezindleko ezihlisiwe ze-flagship i-iPhone X, uhlobo lomkhiqizo waseMelika lwakwazi ukuthola imali erekhodiwe yamadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-88,3.
Ngunyaka owedlule, lapho umbiko wekota waleso sikhathi esifanayo, ama-accountant abika inzuzo kuma-78,4 billion dollars, okuyi- $ 10 billion engaphansi konyaka we-2017. Njengoba kunikezwe ukuthi i-70% yokuthengisa ingukuthengisa kwangaphandle.
Kodwa kusesekuseni kakhulu ukuthi i-Apple ivule i-champagne, ngoba unyaka, amakhasimende awazange asuke kumikhiqizo ebiza kancane aze ayise kumadivayisi abizayo. Abahlaziyi bathi inzuzo yenkampani inikeze i-iPhone X smartphone ebiza ama-999 amadola. Ngokuya ngenani lamadivayisi athengisiwe, amandla wokufunda ayahlehla. Amakhompyutha we-MAC nama-smartphones aswele, njengoba kufakazelwa izinombolo.
Ngokuqondene nesigaba "seminye imikhiqizo", okubandakanya ama-headphones, amawashi, i-Apple TV nokunye okuphathelene nokunye, lapha, kunalokho, ungabona ukwanda kokuthengisa ngo-36% (amadola ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-5,5). Ngezinhlelo zokusebenza ze-Apple, umkhiqizo ubuye wakwazi ukuthola i-18% ngaphezulu kunangesikhathi esedlule (8,5 dollars dollars).
Izoba yini i-iPhone 13 - iqiniso nenganekwane